मलाई अहिले ग”र्ने बा’नी परिसक्यो,,तर बिहे गरेको छैन के गरेर प्या*स मे”टाउ’ने होला ?
March 31, 2022 AdminLeaveaComment on मलाई अहिले ग”र्ने बा’नी परिसक्यो,,तर बिहे गरेको छैन के गरेर प्या*स मे”टाउ’ने होला ?
के भनिन्छ भने, अक्सर दम्पतीको खटपट ओ छ्यानबाट सुरु हुन्छ । फिका यौ, न-जी वनले दम्पतीको स म्ब न्ध सुमधुर रहँदैन । त्यसैले दाम्पत्य सम्बन्धमा यौ न को महत्वपूर्ण भू मि का रहन्छ ।
त्यसो त यौ न जी वन रो माञ्च क बनाउनका लागि श्रीमान र श्रीमती दुबैको समान सहभागिता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ । यसमा एक जनाको मात्र इच्छा पनि लाद्नु हुँदैन । दुबै मानसिक र शारीरिक रुपमा तयार भएपछि ग-रि-ने यौ न क्रि या स ही हो ।
जकी आफ्नो महिला पा-र्ट-न-र-ला-ई कसरी यौ न का ला गि त-यार गर्ने भन्ने प्रायः पुरुषहरुको स म स्या हुन्छ । यौ न स म्ब न्धको क्रममा कस्ता क्रियाकलाप गर्दा आफ्नो पा-र्ट-न-रले उ त्तेज ना म-ह-सु-स गर्छ भन्ने कुरामा पुरुषहरु त्यती चासो राख्दैनन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, केवल राम्रो चु-म्ब न का लागि मात्र होइन राम्रो फो-र-प्ले-का लागि पनि तपाईंंले आफ्नो स्वासलाई लयबद्ध बनाउन जान्नुपर्छ । तपाईंंले जब आफ्नो पा-र्ट-न-रलाई चु-म्ब-न ग-र्नुहुन्छ ।
त्यो समयमा पा-र्ट-न-र-लाई सा-स फे-र्न गाह्रो भएको छ कि भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, तपाईंंको पा-र्ट-न-रलाई उ-त्ते-जि-त गर्न सासले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईंंलाई थाहा हुनु आवश्यक छ ।
घाँ-टी-को वरपर चु म्ब-न गर्दा लामो समयसम्म चु म्बन गर्दै आफ्नो तातो सा-सको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । म हिलाहरुलाई मु ड मा ल्या-उनका लागि र यौ न कि या कला पमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि ओर ल से क्स ले म ह त्व पूर्ण भूमिका निभाउँछ ।
तपाईंंले गर्नुभएको ओ र ल से क्स ले तपाईंंको पा र्ट नर लाई च र म सुख प्राप्त हुन्छ । भ-जाइ-न-ल स्टि-म्युले-श-न-ले म-हि-लाह-रु पूर्णरुपमा म-दहो-स् हुन्छन् ।
त्यस्तो स्थितिमा उनीहरुसँग यौ न स म्ब न्ध राख्न उपयुक्त हुन्छ । यौ न स म्ब न्ध राख्नका लागि यो सही समय हुन्छ । किनभने यो स्थितिमा कपलले यौ न स म्प र्कको अ त्या धि क आ-न-न्द लिन सक्छन् ।
जब कुरा च रम सु ख प्राप्तिको हुन्छ, यसका विभिन्न तरिकाहरु छन् । हिजोआज त इन्टरनेटको माध्यमले पनि तपाईंं कसरी च र म सु ख प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
हालसालै भएको एउटा सर्वेक्षण अनुसार करिब ७० प्रतिशत म-हि-ला-हरुलाई पे-नि-ट्रे-टिव से-क्स-को माध्यमबाट च-र-म सुख प्राप्त हुँदैन । जर्नल अफ से ‘क्स’ ए न्ड म्यारिटल थे-रा-पीमा प्रकाशित अर्को अध्ययनका अनुसार
केवल एक म हिलालाई मात्र भ-जा-इ-न-ल स्टि-मु-ले-श-न-बाट च रम सु ख प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा यदि पे-नि-ट्रे-टि-व से-क्स-को माध्यबाट तपाईंं च र मा सुख प्राप्त गर्न सकिरहनुभएको छैन भने
र च र म सु ख प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । फो र प्ले को माध्यमबाट म हि लाह रु आनन्दको महसुस गर्छन र यौ न स म्प र्क का सम्पू र्ण क्रियाकलापमा र मा उ न थाल्छिन् ।
काठमाडौँमा घर र कार भएकी युवतीलाई, घरज्वाई बस्ने केटा चाहियो ! ज्योती मगर
२० वर्षको उ’मेरमा कुन कुन चा”हानाले छ’ट्पताउछन त यु”वतिहरु
यिनै हुन् आफ्नै पेटमा गो’ली हा’नेर ज्या’न गु’माएकी सैनिक जवान कोपिला
MCC बिरुद्ध एकसाथ ज्ञानेन्द्र शाही, रेखा थापा र राजेन्द्र मैदानमा उत्रिदै (सक्दो सेयर गर्नुहोस)
अर्घाखाँचीमा बस दुघर्टना: घाइतेहरू जटिल अवस्थमा १९ को मृत्यु १० घाइते 😭 मनमा दया भए #RIP लेख्नुहोला ।।